Neefsashada dhulka ee wareegyada dhirta xilliyeed | Cusbooneysiinta Cagaaran
Daniel Palomino | | Ecology, General, Deegaanka
Si loo go'aamiyo muddooyinka sanadka waxaan ku saleysanahay xilliyada, gudahood kuwaas oo muddooyinkaas wakhtiga ah ee aan tixraacno ay qaarkood leeyihiin xaalado cimilo xasiloon oo ku taal gobol la siiyay, inta u dhexeysa
Sidaad ogtahay, muddooyinkaan waa 4 (gu, xagaa, deyr iyo jiilaal) iyo waxay soconayaan ilaa 3 bilood.Haddii ay dhacdo inaadan aqoon, xilliyadu waxay dhab ahaan u sabab yihiin janjeedhka wareegga wareegga Dhulka iyadoo la tixraacayo diyaaradda wareegeeda marka loo eego Sol, sidaas awgeed lagu guuleysto in gobollo kala duwan ay helaan qaddarro kala duwan oo iftiinka qorraxda ah iyadoo ku xiran waqtiga sannadka.
Tani dabcan waxaa u sabab ah muddada maalinta iyo u janjeedha Qorraxda dusha sare.
1 Neefta Dunida
2 XIDIGTA NOAA
3 Wareegyada xilliyeed ee daaqa
5 Caqabadda ugu weyn
Laakiin kaala hadli maayo xilliyada guud ahaan laakiin ku saabsan wareegyada dhirta xilliyeed.
Iyada oo isbedelka xilliyada ay dhirta sidoo kale waxay isku bedeshaa wareeggeediigaar ahaan latitudes ka sii fog dhulbaraha.
Tusaale ahaan, markay dayrta soo gaarto dhirta magacaabay xaalufin caleemaha si ay hadhow uga soo kabsadaan markay guga galaan.
Biqilka abuurka, koritaankooda, luminta caleemaha, ubax, iwm. waa qaybo ka mid ah wareegyada xilliyeed ee dhirta.
Anaga, waxaan ula jeedaa bini-aadamka guud ahaan, waxaan bilawnay inaan faragalin fara badan ku sameyno wareegyadaan xilliyeed, xitaa sidaas oo ay tahay, waxay sameystaan ​​muuqaal waxayna nooga tagayaan muuqaalo sida kan aan ku tusi doono marka xigta.
Sidan ayaan ku arki karnaa wareegyada dhirta xilliyeed taas oo aan ka badnayn aragtida Dhul u gaar ah "neefsasho" iyo nolosha. Tan iyo markii, noolaha oo dhami waxay kuxiran yihiin wareegyadaas koritaanka dhirta, ha ahaato cunto, oksijiin iyo wax ka badan.
Qofna Bremer waxay abuurtay sawirro taxane ah oo ina tusaya "neefsashada" Dhulka iyada oo loo marayo wareegtooyinkan xilliyeed ee dhirtu sannad dhan.
Xogta waxay ka timid XIDIGTA NOAA, codsiyada dayax gacmeedka iyo xarunta cilmi baarista, taas oo isticmaal dareeraha VIIRS (Visible Infrared Imager Radiometer Suite) oo saaran dayax gacmeedka SNPP (Suomi National Polar-Orbiting Partnership) si loo helo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhirta Dhulkeenna toddobaad kasta.
Wareegyada xilliyeed ee daaqa
Khariidada waxaad ka arki kartaa wareegyada xilliyeed iyada oo loo marayo Toddobaadyada 52 muddada muddada sanad ah, gaar ahaan sawirradan ayaa matalaya 2016.
Kordhinta iyo hoos u dhaca koritaanka dhirta cirifka woqooyi iyaga ayaa si gaar ah u muuqda.
Si kastaba ha noqotee, sida qaybaha kala duwan ee meeraha ay muujinayaan, wareegyada kale iyo xilliyada sidoo kale waa la arkaa.
Gobollada New Zealand, Brazil iyo koonfurta Afrika waxay leeyihiin wareegga gadaal ee kan Waqooyiga.
Waxaa sidoo kale la arkay sida Hindiya cimilada sii kordheysa ee qalalan u bilaabato xilliyada.
Isbeddelka gaarka ah ee lagu arki karo khariiddada ayaa la yiraahdaa "Cagaar", ama ereyo cilmi ah oo dheeri ah, ayaa ah Tusmada Cagaarka Dhirta Caadiga ah (SMN).
Cagaarka waxaa loo isticmaali karaa in lagu qiyaaso bilowga iyo da'da jiritaanka dhirta, bilowga xilliga koriinka, iyo wejiyada ifafaalaha.
Meelaha aan lahayn dhir (saxaraha, buuraha dhaadheer, iwm.), Qiyamka la tilmaamay ayaa tilmaamaya xaaladaha dusha sare.
Caqabadda ugu weyn
Abuuritaanka "Neefsashada" ee Dhulka iyada oo loo marayo wareegyada xilliyeed ee dhirta ayaa caqabad ku noqotay tan iyo animation-ku wuxuu ka kooban yahay 50.000 52 wareeg oo u dhigma XNUMX toddobaad ee sanadka.
Wax walba waxaa lagu kala soocaa cabirro kala duwan, midabbo iyo madadaalo sidaa darteed waa la darsay 3 habab oo kala duwan si aad u aragto midka la mid noqon kara kan ugu dabiiciga ah illaa aad ka hesho natiijada aad kor ka arki karto.
Iyo haddii aad weli xiiseyneyso inaad aragto kala duwanaanshaha si faahfaahsan waxaad arki kartaa nooca gaabiska ah Halkan, in kasta oo aan kaaga digayo haddii ay run tahay inay gaabis tahay markaa waa inaad ku sabirto aragtida 52 toddobaad.
Sidii la filayey iyo mahadnaqa Nadieh Bremer waan ku raaxeysan karnaa shaqadan oo aan si cad ugu fiirsaneyno sida dhirtu ugu dhaqmayso sida sanbabada meeraha waana inaan daryeelno oo aan u ilaalino qiimo kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Neefsashada Dhulka ee wareegyada dhirta xilliyeed
Ka helida tamarta dib loo cusboonaysiin karo badaha